Nyeredzi: Mwedzi wose webhuruu muMugovera weCorporate 18 unogona kutsamwisa simba rezviratidzo zvezdiacac - HEALTH PLUS MAG - TELES RELAY
HOME » MAZANO »Kuongorora nyeredzi: Mwedzi wose webhuruu muMugovera weCorporate 18 unogona kukanganisa simba rezviratidzo zvezdiacac - HEALTH PLUS MAG
Astrology: Mwedzi wose webhuruu muMugovera weForpion 18 unogona kukanganisa simba rezviratidzo zvezodhiac
Dzimwe nguva, mukati megore, mwedzi unooneka zvakakwana uye unojeka. Ichi ndicho chishamiso chekugara kwemwedzi, chiitiko chinosangana nesu tose, sezvinoratidzwa nekuongorora nyeredzi. Mwedzi uno, mwedzi wakazara webhuruu muScorpio unozoitika 18 May 2019 ichaunza simba guru kuchinja muupenyu hwezviratidzo zvezdiacac, sezvinoiswa zvakare Women's Health.
Kusiyana nekugara kwegore mwedzi, 18 ingave 2019, pachava nemwedzi wakakwana. Ainzi mwedzi wakachena webhuruu, iye achazvibatanidza neCorporo uye owira panguva yeMwedzi wearuva. Kusarudzwa kwezuva rino uye mararamiro ayo pane zviratidzo zvezodhiac.
Mwedzi wemaruva, quasaco?
Mukuwedzera pakuwedzerwa, mwedzi wose wezuva rino raMay unonziwo "Mwedzi wemaruva" nokuti unofananidzwa nenguva yekutanga mune panguva yemaruva. Maererano neAlgonquin uye nhoroondo dzeAmerica, iyi ndiyo ndiyo nguva yakakwana yekudyara mbeu, kunyanya zviyo zvegorosi, nokuti nguva ino yegore inoratidza kuguma kwekupedzisira kwechando uye kutanga kwemamiriro ekupisa.
Pakati pezvenyeredzi dzeMweya, Mwedzi wemaruva uchave wakamira muSoropo. Izvi zvinoratidza kuti simba richagumburwa, kana rakanaka kana risina kunaka, uye manzwiro achawedzerwa. Nokudaro, dzimwe mhirizhonga dzichatarisirwa. Pakati pechido uye chikonzero, zvichange zvakaoma kuwana huyero.
- Mwedzi wakakwana, Mercury, Scorpio ... zvinokonzera zviratidzo zvezodhiac
Pakazara mwedzi muScorpio - chiratidzo chakatongwa naMaris, nyika yekuita - Mercury, nyika yekufungidzira, ichazvitsvakira pachayo uye inokonzera kushanduka kwesimba.
Vane ruzivo rwechimiro ichi cheva astral vachava zviratidzo zveSoropo, Leo, Taurus naAcarius iyo ichaona kuenderera mberi kunovimbisa mumativi ose ehupenyu hwavo. Pane kurega kutya kuchinja, ivo vachazogona kubatsirwa nekushandurwa kwave vakamirira kwemazuva mazhinji, zvive mune rudo, nyanzvi kana mari yemunda. Chii chokuvadzosa zvakare uye kuvapa ivo a shepi Olympic.
Zvisinei, nguva iyi haingabatsiri kune zvimwe zviratidzo zvezhiacac nokuti vanogara vachizeza pakati pekuita nekufunga. Pachava nekufadzwa kwakapoteredza ivo uye havazozivi kuti vaende kupi. Zviratidzo yechinguva, Gemini kana Sagittarius achava kunyanya kungwarira nokuti manzwiro avo zvose zvakawanda yakajeka uye vacharamba vanowanzotevedzera kuita zvinhu zvinogona kuva migumisiro yakaipa mumavhiki kuuya. Nenzira yakanaka, Mercury ichave iripo kuti ibatsire kuti vave netsika uye vagadzirise pfungwa dzavo.
Iva nechokwadi, zvinhu zvose hazvingave zvisina kunaka nokuti nzvimbo dzakasiyana dzeVenus, Uranus uye Mars dzinosimbisa rudo rwako. Izvo zvakasikwa zvezviratidzo zve zodiac zvichawana zviratidzo zvehurombo uye rudo. Seduction uye chishuvo zvichave chikamu chezvinhu izvi zvose dambudziko!
Pamwechete, ivai chikamu chevaya vanozove vakakanganiswa nemwedzi wose mukati Scorpion kana kwete, kushandisa nguva iyi kujekesa hupenyu hwako nezvinangwa uye kutora nguva yekufungisisa. Dzivisa kuita zvisinganzwisisiki uye kuenzanisa maitiro ako kana iwe uchida chaizvo kufambira mberi. Yeuka kuti uzere kwemwedzi nguva zvinoita pakufungisisa, introspection uye anofunga zvisarudzo, uye zviri chete nemafungiro ichi uchabatsirwa zvakwakanakira nemigumisiro.